Taariikhda Burburka Somaliland - Qaybta Labaad. - Boga Wise Man
Waxa kaloo muhiima akhriste inaad ogaato dhaawaca weyn ee heshiiskii DP World iyo Saldhiga Madaarka Berbera u geystay hanaan socodka dawladnimada Somaliland. Ugu horeyn dawlada Somaliland xaq umay lahayn inay wax heshiisa gasho maadaama sanadka ugu dambeeya dastuurku ka mamnuucayo inay dawladi gasho wax heshiisa oo mugweyn. Dawladii Siilaanyana wakhtigaa waxaabay ku shaqaynaysay muddo korodhsi oo wakhtigeedii caadiga ahaa wuxuu dhamaaday July 2015.
Qodob labaad oo muhiim ahi wuxuu ahaa farsamadii ay wasiiradu u geeyeen warqado af Soomaali ku qoran qaarkood oo ay tilmaameen inuu yahay heshiiskii. Illaa maantadana wax heshiisa may arag xildhibaanada Golaha Wakiilada Somaliland.
Qodobka saddexaad ee la odhan karo waa midka ugu halista badan waa markii ay DP World qoorta inoo sudhay Ethiopia. Iyadoo ka iibisay saamigeedii badh kamida. Arrinta oo wasiir Sacad Cali Shire hore loo sii weydiiyey oo uu beeniyey markii danbena uu dadka lasoo hor istaagay oo qiray inuu jiro arrinkaasi. Waxaynu ognahay in dawlada aynu jaarka nahay ee Ethiopia ee bilaa badda ahi inay in badan ku taamaysay inay yeelato bad iyada u gaara, taas oo weliba ay illaa hada ku hawlantahay inay Berbera ama Saylac ama labadaba gacanta ku qabato. Arrinkani haduu dhaco Somaliland waxay ka dhigaysaa gobol kamida Ethiopia oo kale oo wax danbe oo madaxbanaani ah oo aynu sheegan karnaa meesha wuu ka baxayaa. Wuxuunbaynu la mid noqonaynaa tobanka milyan ee qof ee Soomaalida ah ee ku nool Ethiopia.
Bulshadii Somaliland oo marka hore inyar mooyee intooda badan heshiiska DP World loogu sheegay guul usoo hoyatay Somaliland loona sameeyey balan qaadyo badan sida in baasaboorka Somaliland lagaga shaqayn doono Imaaraadka taasoon illaa hada rumoobin waxa ay ay ku war heleen Ethiopia oo leh ciidan baddeed ayaanu samaysanaynaa, Dekedda Berberana waxaanu ku leenahay 19% saami ah.
Sidoo kale waxa niyad jab weyni yimid markii bulshadu aragtay sida Golayaashii Wakiilada iyo Guurtidu aanay shaqadoodii u raacin ee u ansixiyeen heshiis aanay aragba oo afka looga sheegay.
Maadaama nidaamka Somaliland u dhisan yahay mid loogu talo galay in golayaasha sharci dejintu ay la xisaabtamaan dawlada oo hubiyaan shaqadeeda (check and balances) iskuna noqdaan kafad iyo miisaan marka laan ka mid ah dawladu khaldantu waxa waajiba in laamaha kale dheeli tiraan oo toosiyaan. Hadii saddexdii laamood ee dawladuba wada khaldamaan waa masiibo mushkiladeedu adagtahay in laga soo kabtaa.
Waxaad ogtahay akhriste in waxyaabaha u sahlay in dawlada Somaliland noqoto mid jirta muddo soddon sano ku dhaw oo aan wiiqmin ay kamid yihiin iyadoon ciidan shisheeye ama ciidan ka madaxbanaan Madaxweynaha Somaliland aanay ku sugnayn wadanka Somaliland. Arrintan marka la barbar dhigo walaalaheena Soomaaliya waynu arki karnaa in dhibta koobaade haysata nimankaasi tahay ciidamo badan oo ajaanib iyo Soomaaliba lihi inay ku sugan yihiin Soomaaliya taasoo keentay in dalkaasi degi waayo oo nabad iyo dawlad dhab ahi ka dhalan weydo tan iyo 1991. Waxa nasiib darro weyn oo la yaab leh noqotay in waxgaradkii Somaliland oo madaxdeedii hogaaminayso ogolaadeen in ciidamo calooshood u shaqaystayaal ahi yimaadaan Berbera oo weliba u isticmaalaan saldhig ay ka weeraraan Yaman oo dagaalkeedii illaa imika socdo. Dadka Somaliland oo ah kuwoo soo arkay duqayn diyaaradeed ayay lam filaan ku noqotay in mujaahidiintii shalay ka dagaalamayay dulmigii Siyaad Barre iyo duqayntiisii Hargeysa ay iyagu u sahlayaan Imaaraad iyo Sucuudi inay maatada Yamaniyiinta gumaadaan.
Burbur DP World HESHIISH KHIYAANO] Somalia Somaliland
Previous Post Taariikhda Burburka Somaliland. Qaybta 1aad..
Next Post Taariikhda Burburka Somaliland – Qaybta Saddexaad